बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय लीग शुरू | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय लीग शुरू
on: January 01, 2010 खेल विविध
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय लीग शुरू
विजेताले रु. २५ लाख पुरस्कार पाउने राष्ट्रिय लीगमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुने टोलीले क्रमशः १०, ५ र ३ लाख रूपैयाँ नगद हात पार्नेछन् । प्रतियोगिताका चारजना उत्कृष्ट खेलाडी र एक जना प्रशिक्षकलाई एक–एक यामाहा मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ ।
नेपालका उत्कृष्ट १० क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय लीग फूटबल शुक्रवारदेखि पोखरामा शुरू भएको छ । प्रतियोगिताको पहिलो दिन नेपाल पुलिस क्लब र मनाङ मस्याङदी क्लबले विजयी शुरूआत गरेका छन् । ‘ए’ डिभिजन लीग विजेत पुलिसले पोखरेली क्लब सङ्गमलाई ४–१ गोलले पराजित ग¥यो भने मनाङ मस्याङदीले धराने क्लब मित्रमिलनलाई ६–२ ले पराजित गयो ।
‘ए’ डिभिजन लीगका शीर्ष आठ क्लब, आयोजक कास्की जिल्ला लीग च्याम्पियन सङ्गम क्लब र सुनसरी लीग च्याम्पियन मित्रमिलन क्लब पनि सर्वाधिक पुरस्कार राशीको राष्ट्रिय लीगमा एकआपसमा भिड्दै छन् । गत महीना मात्र सफल कपको आयोजनाले तातेको पोखरा अहिले राष्ट्रिय लीगको रङमा डुबेको छ ।
पोखरालाई फूटबल सिटीका रूपमा विकसित गराउन प्रयासरत कास्की जिल्ला फूटबल सङ्घका अध्यक्ष खेम गुरुङ राष्ट्रिय लीगको आयोजना पोखराकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताउँछन् । प्रतियोगितामा सहभागी अधिकांश क्लबले उपाधिमा आआफ्नो दाबेदारी पेश गरेका छन् । १ महीनाअघि आयोजित सफल कपको फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले आफू उच्च मनोबलका साथ पोखरा आएको बताएको छ ।पोखरा आउनुअघिका पाँच अभ्यास खेलमा अपराजित रहेकाले राम्रो लय पक्रनुका साथै खेलाडीहरू उच्च मनोबलका साथ खेल्ने क्लबका प्रशिक्षक योगम्बर सुवालले बताएका छन् ।
सेनाले खेलेको पाँच अभ्यास खेलमा यति हिमालयन शेर्पा र रानी पोखरी कर्नर टीम (आरसीटी)लाई पराजित गरेको, मनाङसँग बराबरी गरेको र न्यूरोड टीम (एनआरटी)सँग खेलेका दुई खेलमा एक जित र एक बराबरी गरेको थियो । यता आरसीटीका प्रशिक्षक मधु कार्की पनि आफ्नो टोली उपाधि जित्न सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । पुलिस क्लबका प्रशिक्षकले भने पोखरामा खेल्नु आफ्ना लागि सधैं कठिन रहँदै आएको बताएका छन् । त्यसमाथि टोलीका प्रमुख स्ट्राइकर भरत खवास र जुमानु राई तथा भरपर्दा डिफेन्स रविन श्रेष्ठको चोटका कारण यात्रा यसपटक पनि सहज नहुने उनको अनुमान छ ।
चालू सिजनमा मात्र १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको क्लबका महासचिव विनय प्रधानले पुष्टि गरेपछि एनआरटीले मनाङको नाममा रहेको रू. १ करोड २० लाख खर्चको रेकर्डलाई पछि पारेको छ । अर्को खर्चालु क्लब यति हिमालयन शेर्पाका नियमित गोलकिपर रुपक श्रेष्ठ प्रतियोगिताको केही दिनअघि मात्रै विदेश पलायन भएपछि क्लबले सरस्वती युवा क्लबका विकेश कुथु र फ्रेण्ड्स क्लबका सागर गुरुङलाई ऋणमा भियभयाएको छ । २ महीनाको पारिश्रमिक लिइसकेका रुपक प्रतियोगिताको शुरू हुनुअघि एकाएक सम्पर्कहीन भएका थिए । उनी दुबई गएका छन् । एन्फा एकेडेमीका उत्पादन श्रेष्ठका दाजु रञ्जित पनि दक्षिण कोरियामा छन् । यसरी सरकारले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेका प्रतिभाशाली खेलाडीहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुलाई क्लबले चिन्ताको विषय भएको बताएका छ ।
त्यस्तै, यति हिमालयनले बेलायतमा व्यावसायिक फूटबल खेलिरहेको बताइएका कुन्जन गुरुङ तथा तीन विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको क्लबका प्रशिक्षक उपेन्द्रमान सिंहले जानकारी दिएका छन् । विदेशी खेलाडीमा एक अफ्रिकी र दुई कोरियाली रहेको पनि उनले बताए । विदेशी खेलाडी खेलाउने होडमा नबिल थ्रीस्टार र आरसीटीसमेत अगाडि देखिएका छन् । राष्ट्रिय लीगका लागि छोटो समयको अनुबन्धमा थ्रीस्टारले चार अफ्रिकीमूलका र आरसीटीले तीन क्यामरुनी खेलाडी क्लबमा भियभयाएको छ । दुवै टोलीले लीग उपाधि जित्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
पहिलोपटक ‘ए’ डिभिजन लीगका उत्कृष्ट आठ क्लबसँग ठूलो प्रतियोगितामा भाग लिएका राजधानीबाहिरका दुई क्लबले प्रतियोगिताका पूर्वसन्ध्यामा प्रायोजक भेटेका छन् । राजधानीका क्लबहरूको भन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति भएका यी क्लबमध्ये पोखराको सङ्गमलाई क्याराभान समूहले १ वर्षका लागि ३ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । सङ्गमलाई पोखरेली समर्थकहरूले नै सङ्कलन गरेर रू. १ लाखभन्दा बढी नगद सहयोग प्रदान गरिसकेको क्लबले बताएको छ । क्लबले सशस्त्र प्रहरीका स्टार स्ट्राइकर गणेश लावतीलाई ९ खेलका लागि ५० हजार रुपैयाँ ऋणमा ल्याएको बताएको छ । लावतीसँगै एपीएफका अन्य तीन र बौद्धका एक खेलाडी पनि ऋणमा ल्याइएको क्लबका अध्यक्ष मनीप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । सङ्गम क्लबले उपाधि नै जित्ने दाबी नगरे पनि शीर्ष ६ भित्र रहेर लीग अन्त्य गर्नु आफ्नो लक्ष्य भएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।
त्यस्तै, धराने क्लब मित्रमिलनलाई पीएलओ लुब्रिकेण्टस प्रालिले प्रायोजन गर्ने क्लबका अध्यक्ष किशोर झापालीले बताएका छन् । प्रायोजित रकमबारे उनले स्पष्ट नपारे पनि पीएलओको सहयोगले आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको क्लबको लीग यात्रालाई केही सहज बनाउने झापालीको भनाइ छ । विजेताले २५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने राष्ट्रिय लीगको दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुने टोलीले क्रमशः १०, ५ र ३ लाख नगद हात पार्नेछन् । प्रतियोगिताका चारजना उत्कृष्ट खेलाडी र एकजना प्रशिक्षकलाई एक–एक यामाहा मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताका शुरूका २२ खेल पोखरा रङ्गशालामा आयोजना हुनेछ भने बाँकी खेल बुटवलको प्रहरी तालीमकेन्द्रको मैदानमा खेलाइने छ ।
कर्णाली सरकारको बजेट खर्च १० अर्ब, कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?